जुम्लाको रोपाइँमा देशबारे चर्चा - Online Majdoor
जुम्लाको रोपाइँमा देशबारे चर्चा
(जेठ–असारको महिना रोपाइँको समय हो । सात हजार एक सय फिट उचाइको जुम्लाको सिंजामा पनि मार्सी धानको रोपाइँ भइरहेको छ । रोपाइँमा लागेका एकै परिवारका आमा, बुवा र छोरी खाजा खानुअघि थकाइ मार्दै एकछिन देशको विषयमा कुराकानी गर्छन् ।)
छोरी– जुम्लामा मार्सी धानको बिउ चन्दनाथ भन्ने गुरुले भारतको काश्मीरबाट ल्याएका हुन् । यो धानको चामलले पनि उच्च पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई बचायो ।
आमा– हो, तर यहाँ चीनले विकास गरेको उन्नत जातको धानको बिउ पनि ल्याउन पाए तराई र भारतबाट चामल आपूर्ति घट्ने थियो ।
बुवा– चीनले यति उचाइमा फल्ने धानको बिउ उत्पादन ग¥यो कि गरेन ? काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा फल्ने चिनियाँ धानका बिउको धेरै चर्चा छ । यो वर्ष पनि चीनबाट धानको बिउ आयात भएको छ ।
छोरी– सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक खेती क्षेत्र बनाउने दाबी गरेको हो । तर, लुकिछिपी रासायनिक मल पनि आइरहेको छ । सरकारहरूले बोलेको कुरा पूरा नगर्ने भएर नै जनतालाई दुःख भएको हो ¤
आमा– रासायनिक मलको खरिदमा सरकारी अनुदान यो वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ छ भने आगामी बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । प्राङ्गारिक खेतीको लागि अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारको ध्यान प्राङ्गारिक खेतीमा गएकै छैन ¤
बुवा– प्रम केपी ओली मन्त्रीमण्डल पुनःगठनमै व्यस्त छन् । आफ्नो पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो छ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको मन्त्रीमण्डललाई प्रम ओलीले चार पटकको पुनः गठनपछि मात्र २०७५ जेठ १८ गते २५ सदस्यीय अर्थात् पूर्णता दिन सकेका थिए ।
छोरी– एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकता नै जनताको निम्ति अभिशाप भयो, जनतालाई धोका भयो ।
आमा– त्यही त यसैलाई ‘कम्युनिस्टको दिग्विजय’ भनी प्रचार गरियो । कहाँको कम्युनिस्ट ¤ यिनीहरू त सुरुमा ‘भाइ काङ्गे्रस’ थिए, अहिले ‘दाइ काङ्गे्रस’ भए । एमालेका कार्यकर्ताहरू ‘एमाले पनि हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट पनि हुनुपर्ने’ भनी अन्योलमा छन् ¤
बुवा– यो साढे तीन वर्षमा १६ औँ पटक मन्त्रीमण्डल पुनःगठन भयो । ५९ जनालाई मन्त्री हुने मौका मिल्यो । रघुवीर महासेठ यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उपप्रम भए । यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । बीचमा उनकी श्रीमती जुलीकुमारी महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भइन् । यसपटक उनलाई हटाइयो ।
छोरी– स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङकी श्रीमती उषाकला राई प्रदेश १ को मन्त्री छिन् । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अनिलकुमार झाकी श्रीमती डिम्पलकुमारी झा प्रदेश २ को मन्त्री छिन ।
आमा– आन्दोलनमा जीवन बिताएकाहरूको एकै परिवारका दुई वा बढी नै पदमा पुग्नु अन्यथा होइन । तर, प्रायोजितरूपमा पु¥याइनु नेपालको हितमा हुने छैन ।
बुवा– पदमा पुग्नु पनि क्रान्तिको निरन्तरता हुनुपर्ने हो तर नेपालका शासक दलहरूमा करोडाँै रुपैयाँ चन्दा दिएर सांसद र मन्त्री बनाइन्छ । २०६४ सालमा दिवाकर गोल्छा नेकाबाट, विनोद चौधरी एमालेबाट, राजेन्द्र खेतान माले सीपीबाट संविधानसभामा सदस्य भए । विनोद चौधरी यस पटक काङ्गे्रसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने ।
छोरी– उपप्रम भएका राजेन्द्र महतोले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा लगत्तै प्रम ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ र ‘ठग’ को आरोप लगाएका थिए । उनले मधेसको माग सम्बोधन नभएको आरोप लगाउँदै २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानलाई जलाएका थिए ।
आमा– महाकाली सन्धिलाई लिएर महतोले एक वर्षअगाडि संसद् बैठकमा प्रम ओलीलाई ‘देशघाती’ को आरोप लगाएका थिए । उही महतो अहिले प्रम ओलीको उपप्रम भए । नैतिकवान्हरूले यस्तो काम गर्दैनन् ।
बुवा– यस अगाडि महतोको नागरिकताबारे अख्तियारबाट अनुसन्धान नै भएको हो । प्रम ओलीको सरकारमा स्वास्थ्यसहित उपप्रम बनेका फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ‘मधेसको समस्या बिर्सेका’ भनी राजपाबाट विरोध भएको थियो । डेढ दुई वर्षपछि उपेन्द्रको सरकारबाट वहिर्गमन भयो । त्यसयता जसपा (ठाकुर–महतो) र फोरम (उपेन्द्र) बीच पार्टी एकता भई जसपा गठन भयो । यस पटक उपेन्द्रको विरोध भएपनि ठाकुर–महतो पक्षका आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री भएका छन् । अगाडि उपेन्द्रले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र पाएका थिए । यो पनि उपेन्द्रको आक्रोशको विषय हुनुपर्छ । नेपालको मन्त्रिमण्डल गठन र पुनःगठनमा छिमेकी भारतका शासकहरूको पनि प्रभाव पुरानो समाचार हो ।
छोरी– बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनायता शासक दलहरूमा ‘आयाराम गयाराम’ सांसदहरू धेरै भए । भर्खरै स्वास्थ्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका हृदयश त्रिपाठी एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका हुन् । उनी आफूलाई स्वतन्त्र दाबी गर्छन् । यस्तै दाबी अगाडि पद्मरत्न तुलाधरले पनि गरेका थिए ।
आमा– यस पटक मन्त्री भएका विमल श्रीवास्तव र उमाशङ्कर अरगरिया तथा राज्यमन्त्री भएका चन्द्राकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङ फोरमबाट समानुपातिक सदस्य निर्वाचित भई ठाकुर र महतोको पक्षमा लागेका हुन् ।
बुवा– उपप्रम बनेका रघुवीर र स्वास्थ्यमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ यसअघि माधव पक्षमा लागेका थिए । प्रम ओलीले रघुवीरकी श्रीमती जुलीकुमारीलाई मन्त्री बनाएपछि रघुवीर दम्पतिले माधव पक्ष त्यागे । तामाङकी श्रीमती उषाकला राईलाई प्रदेश १ मा मन्त्री बनाएपछि तामाङ दम्पतिले पनि माधव पक्ष त्यागे ।
छोरी– यस अगाडि माओवादीका सात जना बादल, भट्ट, रायमाझी, साहलगायत एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री बनेका थिए । यस्तो अनैतिक काम नेकाको सरकारमा पनि भएको थियो । २०७० मा उम्मेदवार नबनाइएपछि सर्लाहीका लीला श्रेष्ठले रातारात माओवादी बनेर निर्वाचन जिते । आश्चर्य उनी २०७४ सालको चुनावमा पुनःनेकाबाटै उम्मेदवार भए तर पराजित भए ।
आमा– शासक दलहरूको नाम फरक काम उस्तै भयो । नागरिकता अध्यादेश, सार्वजनिक संस्थान निजीकरण, चुरे दोहनमा यिनीहरूको सहमति नै हुने भयो ।
बुवा– नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित नभएमा देश सिक्किम जस्तै हुने अवस्था छ । अब खाजा खाने बेला पनि भयो । बाँकी कुराकानी पछि गरौँला !
संस्कृति र वातावरणका कुरा
‘एमसीसी’ नेपालको हितमा छैन